crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Dr Zaki Naik oo sheegay in xukuumadda Hindiya suurad-xumeynayso sumcaddiisa. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka June 4, 2017	0 296 Views
Kuwait (Himilonews) – Gudaha wareysi dhawaan lala yeeshay, daaciga Muslimka ah ee Dr Zakir Naik wuxuu ka hadlay doodaha hareeyey laftiisa iyo sida dowladda Hindiya oo kaashanaysa warbaahinta dalkaas ay iskugu dayayso inay ku sumadayso dagaal-huriye.
Waraysiga oo uu siiyay KTV Al Majlis – oo hoos yimaada fogaan-aragga dowliga ah ee Kuwait Television KTV, Naik wuxuu sheegay sida ay dowladda Hindiya iskugu dayday inay ku xeydaabto isaga iyo ururkiisa kadib qaraxii argagaxiso ee ka dhacay Dhaka, dalka Bangladesh.
Wuxuu sheegtay in haddii muuqaalladii uu duubayay in ku dhow 15 sano uu ku maleegi jiray falal argagaxiso, maxay dowladda Hindiya ay hadda un tooshka ugu ifisay arrintan?
Wuxuu yiri: “Waa murugo in dowladda Hindiya marar badan ay igu casuuntay inaan khudbado diimeed ka jeediyo Akadeemiyada Qaranka Heydrabad. Mararka qaar xattaa wax laygu cadaadin jiray inaan soo xaadiro si aan u jeediyo khudbad.”
Naik ayaa doorashada wasiir loogu doortay Yogi Adityanath ku tilmaamay mid muujinaysa sida dowladda Hindiya ay ugu sharfayso canaasiirta xag-jirta Hinduuga ah – oo diiday in la duugo gabdhaha Muslimaadka – kufsadana meydadka inay noqdaan wasiiradda ugu xilalka sarreeya dowladda.
Wuxuu sheegay in kaliya dowladda Hindiya ay dooneyso inuu gacanta u galo – wuxuuse iska diiday damaanad-qaadkooda maadaama qof kasta uu og yahay waxa booliiska Hindiya ay doonayaan.
Wuxuu xusay in sharciga Hindiya uu u ogol yahay inuu jeediyo aragti-diimeedkiisa. “Anigu ma jabin hal sharci oo kamid ah sharciyada dalka,” ayuu yiri.
Naik ayaa ku nuuxnuuxsaday laba-wajiilanimada xukuumadda Modi. Wuxuu yiri dadka waxaa lagu dilaa goob fagaare ah, hayeeshe halkii ay diiradda saari lahaayeen dhacdada, waxay ku mashquulaan haddii hilibka la cunay uu ahaa mid lo’aad ama ari.
Previous: Argagax – Muslimad si sanduleysan looga xayuubiyay xijaabka!
Next: Shiinaha – Markay Geeduhu helaan Qadarinta ay mudan yihiin!